उपचार गर्न गएका देउवा कहाँ गायव भए ? | जनदिशा
उपचार गर्न गएका देउवा कहाँ गायव भए ?
जनदिशा August 21, 2018	No Comments नेपाली कांग्रेसका सभापतिशेरबहादुर देउवा
काठमाडौं, ५ भदौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारको लागि पत्नीसहित सिंगापुर गएका थिए । उनी सिंगापुर गएको एक साताभन्दा बढि भैसकेको छ ।
शेरवहादुर देउवाले स्वदेश फर्किन ढिला गरीरहदा तनाब उतपन्न भएको पार्टीका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेले बताएका छन ।
पार्टीको महासमिति बैठक यही भदौभित्रै बोलाउनुपर्ने हुदा देउवाले ढिला गरे समस्या उत्पन्न हुने बताएका छन । उपचारको लागि पत्नीसहित सिंगापुर गएकादेउवा यतिवेला सिंगापुरबाट नयाँ दिल्ली आएका छन । देउवाले भारतीय शीर्ष नेताहरुसँग गोप्य भेटवार्ता गरीरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
देउवाले कुन बिषयमा भेटवार्ता गरिरहेका छन भन्ने कुनै जानकारी आएको छैन ।
Previous Previous post: नेपाल तेक्वान्दो खेलमा आज पनि पदकविहीन
Next Next post: प्रदेश २ कि भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीको चटक,कहिले गाडी कहिले मान्छेको लावालस्कर